Ukuphupha ngokuSebenzisa kwakhona Discover Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umgibe sisitshixo sokhuseleko esifakwe ngokusisigxina kwindawo. Kukho imigibe yeentaka, ngoncedo lwazo zibanjiwe, kunye nemigibe yokubambisa iintlanzi nezinye izilwanyana zasemanzini. Kukwakho ekuthiwa yimigibe yenewt. Zisetyenziselwa ukufumanisa izilwanyana zasemanzini kwiindawo ezithile.
Imigibe yeentlanzi kudala yajikeleza, mhlawumbi ukusukela ngeMesolithic. Kwimo yazo yoqobo, zazakhiwe ngamatye okanye ngeentonga emanzini ukukhokelela kwiintlanzi echibini. Ukungena kuyilelwe ngendlela yokuba iintlanzi zingene, kodwa azaze zashiya.
Nanamhlanje, iinkqubo zokubambisa iintlanzi zisakhiwa ngokufanayo. Nangona kunjalo, ngoku kukho imigibe esele yenziwe ngohlobo lweebhasikithi ezikhethekileyo. Ngokuqhelekileyo ziyi-cone okanye i-barrel emile. Izinto zayo zihlala zibhaskithi yocingo, umnatha okanye ibhasikiti. Kwakhona, namhlanje kusetyenziswa iplastiki.
Ukongeza, kwiimeko ezininzi imigibe yeentlanzi iyalungelelaniswa nohlobo lweentlanzi ezinokubanjwa. Ezona zixhaphakileyo zezixhobo zokubambisa i-eel.
1 Uphawu lwephupha «Sebenzisa kwakhona» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Phinda usebenzise kwakhona» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Sebenzisa kwakhona» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Sebenzisa kwakhona» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi litolika iphupha lomgibe ikakhulu njengesilumkiso xa uphupha. Kuya kufuneka uthembeke kwaye ungene el mundo yeewotshi. hlala unyanisekile kwaye ungazibandakanyi nezinto ezingavumelekanga.
Ukuba ubona intlanzi ibanjiswe kumnatha wokhuseleko ephupheni, kuya kufuneka ngokubanzi uqonde ukuba enyanisweni, kuvakala ngathi ubotshelelwe kwimeko. Ixhoba lihlala likule ndawo akukho ndawo yokuqhuba kwaye kufuneka uqubude kwintando yabanye. Ukuba umlobi ulawula umgibe wakhe ngelixa elele, uhlala efuna ukujonga nzulu izinto ezimngqongileyo. Kuba apha kubonakala ngathi kukho abantu abafuna ukukulimaza.
Umgibe wocingo unokusebenza njengephupha malunga nemiqobo okanye ingxaki bonisa ukuba ngubani onokufikelela kumphuphi. Umgibe weplastiki ngexesha lokulala unokubonisa ukungafikeleli kunye nokuthembeka komntu kuthethwa ngaye.
Ukuba umgibe ubunjwe ngomgqomo ephupheni, ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo kwihlabathi lokuvuka ukuze uhlale uzolile kwaye ulumke. Kuba mhlawumbi unayo impembelelo eyonakalisayo andikaqapheli okwangoku.
Uphawu lwephupha «Phinda usebenzise kwakhona» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "ukuphinda usebenzise" lunokutolikwa ngokufanayo kumnatha wokuloba. Kungenxa yokuba nabani na ophupha umnatha onje wokuloba ulangazelela ekugqibeleni ukufumana iqabane elifanelekileyo kwaye intsebenziswano eyimpumelelo ngokulandelelana.
Ukuba umphuphi ubamba iintlanzi ngesibatha seentlanzi ngelixa elele, kufanele ukuba kube njalo kuye iminqweno yesini yazi ukuba yeyiphi ongathanda ukuhlala nayo kunye neqabane elifanelekileyo. Ukubeka umgibe emanzini kunokukhuthaza ukuzivavanya. Kuya kufuneka ukhathalele ubuntu bakho kunye neminqweno yakho.
Umgibe we-eel unokuba ngumfanekiso wephupha onokubakho ngokuxhomekeke kutoliko lwengqondo ngephupha. Isiqalo esitsha okanye ubonise utshintsho kwilizwe lokwenyani. Umgibe wenewt ngelixa ulele uhlala ubhekisa kwiziganeko zangaphakathi ekufuneka ziqwalaselwe ngokusondeleyo.
Nangona kunjalo, ukuba ubona umgibe wentaka ephupheni lakho, ungasifumana isicelo, Uxolo kwaye uzise ulwakhiwo kumphefumlo wakho. Kuba oku kubonakala ngathi kuphazamisekile ngoku.
Uphawu lwephupha «Sebenzisa kwakhona» - ukutolika kokomoya
Ukuba kukho into ebanjiswa ngumgibe ephupheni, oku kunokubonwa ngokomoya kwiminqweno yamaphupha ngawe. ukwamkelwa ibonisa ulwazi kunye nokuqonda ngokomoya.